Akhriso: Faah-faahinta 664 Shil Oo Ka Dhacay Muqdisho, 448 Ka Mid Ah Waa Bajaaj – Goobjoog News
Taliska ciidamada booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan qeybta nabadgelyada waddooyinka ayaa todobaadkan soo gubiyey warbixin la xiriirtay shilalkii dhacay 6-dii ee ugu horeysay sanadkan 2018-ka.
Shilalka ayaa guud ahaan waxaa ay gaareen 664 oo isugu jiray gaadiidka noocyadiisa kala duwan, oo ay ku jiraan gaari gacan iyo gaari dameer
Shilalka oo Faah-faahsan:
May waxaa dhacday 115 shil, 2 qof ayaa dhimatay, 29 dhaawac fudud, 47 dhaawac culus, khasaaraha gadiid waxaa lagu qiyaasay 216 gaari. Dadka waxaa waxyeelay hey’ado kala duwan: Booliiska 3 qof, Xoogga 2 qof , usluubta hal qof, NISA hal qof, AMISOM 2 qof , Bajaaj 80 qof, Baaskil waxbo, Mooto 11 qof, Gaari Dameer waxbo iyo gaari gacan waxbo.
June waxaa dhacday 81 shil, 3 qof ayaa dhimatay, 33 dhaawac fudud, 33 dhaawac culus, khasaaraha gadiid waxaa lagu qiyaasay 152 gaari. Dadka waxaa waxyeelay hey’ado kala duwan: Booliiska 9 qof, Xoogga 3 qof , usluubta waxbo, NISA waxbo, AMISOM hal qof , Bajaaj 56 qof, Baaskil waxbo, Mooto 8 qof, Gaari Dameer hal qof iyo gaari gacan oo hal qof ah.
Guud ahaan: Guud ahaan shilalka dhacay waa 664, waxaa dhintay 37 qof, dhaawac culus 222 qof, dhaawac fudud 303, khasaare gaadiid waxaa uu gaaray 1,115, booliiska waxaa ay waxyeello u geysteen 25 qof, xoogga dalka 9 qof, Asluubta hal qof, NISA 12 qof, AMISOM 8 qof, Mooto Bajaaj 448 qof, Baskil hal qof, Mooto 62 qof, gaari dameer 5 qof iyo gaari gacan 2 qof.